ဘီရိုလေးတွေ ရှင်းလိုက်ရအောင်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘီရိုလေးတွေ ရှင်းလိုက်ရအောင်….
Posted by Kaung Kin Pyar on Oct 17, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 13 comments
အားလုံး သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ..။ တွံတေး ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ခလေးတွေ ၆၀၀ရာကျော်ရှိတာပါ..။ ခု မိုးတွင်းလဲ ဖြစ်တော့ သူတို့အ၀တ်တွေက မခြောက်တော့ ၀တ်စရာကမရှိ၊ မခြောက်တစ်ခြောက်ကိုပဲ ဖြစ်သလိုဝတ်တော့ ဖားဥတွေစွဲ၊ နေမကောင်းတွေဖြစ်၊ အရေပြား မှိုစွဲတာနဲ့ ကြားရတာ တစ်ကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး..။ ကောင်းကင်ပြာအ၀တ်တွေရော၊ နီးစပ်ရာတွေမှာ အလှူခံပြီး အ၀တ်တွေ ကျောင်းသွားပို့ချင်စိတ် အရမ်းဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခက်တာက ကောင်းကင်ပြာ အသိတွေကိုလဲ အလှူခံပြီး၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘီရိုဖွပြီး၊ မိဘနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကိုလဲ မဲဆွယ် အတင်းဝင်ရောက် နှောင့်ယှက်ယူငင်အနုကြမ်းစီးပြီးနောက်………………….
ကောင်းကင်ပြာလဲ လက်ချမီးမဟုတ်နေတော့ အဲ့အထုတ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုခရီးဆက်ရမှန်း မသိဖြစ်နေပါတယ်.။ ရုံးက သွားဖြစ်ရင်တော့ ရုံးက ကားနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ရှင်။ ခု ရုံးမှာ စုံစမ်းကြည့်တော့ အစီအစဉ်က မရှိနေသေးပါဘူး..။ ကိုယ်တိုင်ကားငှားသွားဖို့ကျတော့လဲ အဲ့လောက် သူရဲကောင်း မလုပ်ရဲဘူးရှင့်..။ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ..ဒီလကို..။ ကြိုတင် Budget တွက်ကြည့်တော့ Income နဲ့ Expenses ရဲ့ Balance က (-) တောင် ပြနိုင်သေးတယ်..။ (ဒီလမို့ (-) ပြလို့ နောက်လလဲ (+) မဖြစ်ပါဘူးလို့..:-D)။ ဒီလ ပိုဆိုးတာက ကန်တော့ပစ္စည်းရောင်းစားသလို ရမယ့်မုန့်ဖိုးတွက်ပြီး ကန်တော့ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးကြတော့လဲ နည်းနည်းရှက်သလားလို့ပါ။ ပျိုးတာ နည်းနည်းများ များသွားလား မသိဘူး။ လိုရင်းပဲ တည့်ပြောပါတော့မယ်..။
ဘီရိုလေးတွေ ရှင်းလိုက်ရအောင်ဆိုလို့ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး…။ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေရဲ့ ဘီရိုတွေကို ရှင်းစေချင်တာပါ..။ ဒါမှလဲ ကိုယ့်အတွက် မလိုတော့တဲ့၊ မတော်တော့တဲ့၊ မကြိုက်တော့တဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ထွက်လာမှာကိုး…။ ခလေးတွေနဲ့ ဆိုဒ်တော်မတော်ကတော့ မပူပါနဲ့နော်..။ ဆိုဒ်စုံ၊ လူစုံမို့ အဆင်ပြေမှာပါ…။
ဒါကြောင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများအချိန်ရရင်ဖြင့် အားလုံးစုပေါင်းပြီး ကိုယ့်အတွက်ပိုနေတဲ့အသုံးအဆောင်လေးတွေ ဝေငှကြရအောင်ပါလို့ သီတင်းကျွတ် အခါသမယမှာ နိဗ္ဖာန် အကျိုးမျှော်ပြီး နှိုးဆော်ပါတယ်ရှင်..။ သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိမှာပါ..။ အားလုံးရဲ့ Comment များ မျှော်လင့်လျှက်
ပျောက်ချက်သား ကောင်းလှချည်လား ငါ့ ညီမရေ
ကောင်းပါပြီ ၊ အိမ်က ဘီရိုကို မွှေနှောက်ပြီး
ရုံးမှာလည်း ဒမြတိုက်ကြည့်ပါ့မယ်နော့ ၊
ဗီဒိုလေးတွေရှင်းပေးပါ့မယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုအားလုံးစုလိုက်ပါ့မယ်။ သွားလှုဖို့ကတော့ တိုင်ပင်ကြည့်ကြ တာပေါ့နော့။ အ၀တ်တွေစုဆောင်းပြီးရင် ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာလေးလဲပြောပေးပါအုံး
မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရွာသူားတွေကို
ပြန်တွေ့ နေရလို့ ဝမ်းသာနေပါတယ်
အမ အဝတ်သန့်သန့်လေးတွေလည်း စုပေးပါ့မယ်။
အားရင်လိုက်ခဲ့ဖို့ စုပေါင်းသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင်လည်း သိချင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းသယ်ဖို့ ကားလိုရင်လည်း ရပါတယ်။
သေတ္တာလေးဘဲ ရှင်းထားလိုက်မယ်နော် …
ကျန်ဒဲ့ လူတွေလည်း မရှိ ရှိတာ ရှင်းဂျဘာအုံး
သေရင် အကုန် ထားခဲ့ရမှာ ..
ဒီတော့ အကုန် အပြောင်သာ ရှင်းပလိုက် ..
ဘာမှ သံယောဇဉ် ငြိမနေဂျနဲ့ …
အေး မိအံ ညီးသံယောဇဉ်အကုန်ဖြတ်နော်။ ညီးစကားနဲ့ညီးပဲ။ တခါတည်းသာစွန့်စရာရှိစွန့်လိုက်အေ။ ပစ်စည်းကောလူကောနော်။ ဒါဗြဲ
မနေ့က ကိုးနတ်ရှင် မျက်နှာသာမပေးမှုကြောင့် Post တင်ပြီးပြီးချင်း ရုံးဆင်းသွားပါသဖြင့် စာမပြန်ဖြစ်သည်ကို အထူးတောင်းပန်ပါသည်။
ဦးမျိုးရေ….ရွာထဲမရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ရွာသူားအားလုံးကို သတိရပါတယ်…။ ဒမြတိုက်တာ အောင်မြင်ပါစေလို့။
မTNAရေ…ကောင်းကင်ပြာတော့ နောက်လဆန်းလောက်မှန်းပါတယ်..။ အားလုံးတိုင်ပင်ပြီး စီစဉ်ကြတာပေါ့နော်..။
ကောင်းကင်ပြာလဲ ကိုးနတ်ရှင်ကြောင့်ရော အလုပ်များတာရောနဲ့ ရွာကိုမရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး..။ ဒါပေမယ့် ရွာကိုတော့ မမေ့ပါဘူး…။
ပိုက်ဆံပါ လှူချင်တယ်ဆိုလို့ သာဓုခေါ်ပါတယ်..။ ဘုန်းဘုန်းကို ၀တ္ထုငွေကပ်ချင်လဲ ရပါတယ်..။ ခလေးတွေကို မုန့်ဝေတာမျိုး၊ စာရေးကိရိယာ ဝေတာမျိုးလဲ ရပါတယ်..။ အတန်းကြီးတွေအတွက် အထူးထုတ်စာအုပ်တွေလဲ ပညာဒါန ပေးလို့ရပါတယ်လို့…။
ကောင်းကင်ပြာလဲ မမတို့နဲ့အတူ စုပေါင်းသွားချင်ပါတယ်..။ အားလုံးလဲ အားနိုင်တဲ့ Sunday လိုနေ့မျိုး သွားမလားလို့ မှန်းပါတယ်..။ ကိုမတ်ကိုတော့ အကူအညီတောင်းထားပါတယ်…။ ရက်သတ်မှတ်ပြီးရင်တော့ ပြန်အကြောင်းကြားပါ့မယ်ရှင်…။
ကျုပ်ကတော့ အ၀တ်အစားကို တော်တော်ဟောင်းတဲ့အထိ ၀တ်တတ်လို့
ကျုပ်မ၀တ်တဲ့အ၀တ်အစားကို လောကမှာ ဘယ်သူမှလဲ မ၀တ်တော့လောက်ပါဘူး…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ပါရစေဗျာ….
ကျနော် အဝေး အဝေးကို ရောက်နေရလို့ ရွာသားတွေနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုတော့ ပြန်ရောက်ပြီဆိုပါတော့ ဘယ်တော့ပြန်သွားရမလဲမသိ
ကောင်းကင်ပြာရေ…. ကျနော်လည်း ပါဝင်ချင်ပါတယ်ဗျာ…. ကောင်းကင်ပြာပြောတာ မင်္ဂလာပရဟိတကျောင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ..
ကျနော်လည်း အရင်က ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်တယ်ဗျ… ကောင်းကင်ပြာတို့သွားဖြစ်ရင် ပြောပါဗျာ… လိုက်ခဲ့ချင်လို့ပါ
ခုလိုမျိုး အားလုံး Participate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကောင်းကင်ပြာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်..။
ကောင်းကင်ပြာတော့ နောက်လဆန်း Sunday တစ်ရက်လောက်သွားမလားလို့ စဉ်းစားပါတယ်..။ အားလုံးလဲ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အချိန်လို့ ထင်ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ်..မင်္ဂလာပရဟိတ မိဘမဲ့ကျောင်းပါ..။ ကျောင်းသူားတွေ အခြေအနေကတော့ အကိုသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ..။ အဆင်ပြေရင် အဲ့ဒီကျောင်းကိုရွာသူားတွေနဲ့ အတူသွားဖို့ အချိန်ပေးပါလို့…..တောင်းဆိုပါရစေ..။
ဦးဦးပါလေရာနဲ့ မပဒုမ္မာကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ဦးပါရေ…အ၀တ်တွေအရမ်းဟောင်းလို့ ပြဲနေရင်တောင် ကျောင်းမှာ စက်ချုပ်စက်ရှိလို့ စိတ်မပူပါနဲ့လို့…။ ရွာသူားတွေကို တစ်ခု Request လုပ်ချင်ပါတယ်..။ ကလေးတွေအတွက် မုန့်တွေဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် နည်းနည်းအထားခံတဲ့မုန့်မျိုးဝယ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်..။ ကောင်းကင်ပြာ တစ်ခါကတင်တဲ့ Post လိုပါပဲ..။ ဒီမှာ သူဌေးခလေးတွေ မစားချင် မသောက်ချင်လို့ ဆေးတွေတိုက်ပြီး ချော့ကျွေးနေရတယ်..။ ဟိုမှာတော့ ကောင်းကင်ပြာတွေ့တဲ့ မုန့်က Over3Months Expire ပါ..။
လူကြီးတွေအတွက် ၀ယ်တဲ့မုန့်ဆိုရင်တော့ အထားမခံလဲရပါတယ်လို့..။ နေ့ချင်းပြီးကုန်မှာမို့လို့